Mbira anodziridza hapana zvaano nyanya kuziva nezvadzo, kunyange akave mupfuri wadzo, nekuti akawana dziripo. Pakudziteerera munhuwo zvake haagone kunzwa mbira dzaka turwa ne dzisina
Chino ndishamisa nanhasi ndechekuti, vadzimu vakateerera munhu achiridza mbira dzake, vanodzinzwa kuti mbira idzodzo kuti hadzina kubikirwa hwahwa, hadzina kuturwa. Pauno dziidzira mbira paya, kana wazosvika pekuti wasimba pakudziridza kana kuti, wavakugona kurara mubira uchiridza, ndipo panozo bikwa hwahwa hwembira idzodzo. Dzoturwa kuvadzimu mbira dzako dzauno ridza dziya.
Zvakafanana nekuti ukaenda kwaunonoudzwa kuti pauri pari kudiwa fuko ringava reretso, reguru rehanga, dema, jena kana rehungwe. Ukatengerwa kana kutenga jira iroro, rikasazo bikirwa hwahwa kuti riturwe kuvadzimu, rinenge risati rasvika kwavari. Rinongo ramba richinzi haripo chete. Parinombo sumwa paya rinoonekwa sechishwe chete. Ungatova pinduravarikukudza ivavo vacho kuti riripo wani jira ramuri kureva, pamwe unongonyarara ndokunge waenda kwaunono taurirwa kunzi kuri kudiwa jira rauinaro nechekare. Pamudzimu kana pa n'anga pacho ungatobvapo uchiti havaone.
Hongu havarione nokuti rinenge risina kuturwa nebeta kuti varione. Kana usina vehukama vangabike beta rekutura mbira dzunoridza inga kune tsumo iya inonzi "tsuro yemumusha inorohwa nemupfuuri wanzira wani. Rinogona kubikwa kumatare evanoziva Chizezuru, kwete kwauno bvisiswa mari yekuti vakuitire. Mari ingangova yekubatsira pane zviri kudiwa kushandiswa ipapo, ndokunge vakaomerwa, kwete yekupa ivo semubhadharo. Asi kutsvene ndekwe vanoita pasina chako chaunofanira kubvisa ipapo kuti zviitwe. Ndozvatinoziva isu kwedu, kuti mbira dzako dziturwe dzive nemutsigo.
Kunokandira. Chinoitika ndechekuti, kuenda kunokandira hakuendwe wega, ndokunge paine chakusimudza kuti uyende.
Kare mudzimu wemumusha uri wedzinza rako, ndiwo waitotaurira mhuri kuti imbofamba kunokandira. Ndivo vaitoti zvakare endayi kwanhingi. Kazhinji ukanzwa vodaro, inhau inenge yakanangana navo, saka nekudaro havanga zvitaurire pachezvavo.
Zvino mazuva ano, kuenda kuno kandira zvakwava kungoendwa munhu uri wega, zvichikonzerwa nemagariro atisiyanei neekare chiita kudai. Pfugama, isa bute, kana usina bute tsvaga kana kamedu kechambwa kana iyoyi fodya yechimonera pasi kana zvawoma uri musango kusina kwaungawane bute. Pfugama waka tarisa kumabva zuva, kana wazvigona kuri kuseniseni. Wuchira wovazivisa kuti ndiwe ani mwana waani, kutaura vese vakakubereka vekwaamai kusvika pana baba vaasekuru vako, vekwababa ndizvozvozve nemadzimbuya ako vaka bereka amai nevakabereka baba. Kana usina kana vaunoziva kuti baba vako ndevekupi kana amai ndeve kupi hazvireveka kuti hahuna dzinza kwawakabva, kuriko, variko kusangovaziva chete. Saka unopfugama chete uchivaudza uchiti hapana vandinoziva imi nemazita enyu. Taura chete iwewe kuti: Nhau yanda pfugamira ndeyekuti ndanetswa nezvakati zvikati vakuru vangu. Ndati ndikuzivisei kuti ndichambo famba kunotsvaga kuti chii. Ukadaro kuchine kana mazuva matatu usati waenda, imwe nguva vanokuudza zvekuita kuhope, zvekuti pamwe hauzomboenda. Kana vasina kuku pindura enda kunobvunza kuye, pakusimuka wopfugamazve kuvazivisa kuti wavakusimuka kuenda.
Uchisvika kuya unosvikoisirwa zvinhu zvese pachena, nokuti ivo vadzimu vako ndivo vanoenda kwawaenda kuya, kuno zivisa vaya vauri kunobvunza zvauri kufanirwa kuziva. Ukangoita chiende-ende, mudzimu kana n'anga iya inono kudzomotokera ukabvapo uchiti havaone. Vamwe vanokudzora, vachikuudza kuti wangobva kumba usina kuudza vadzimu vako. Zvaunenge waudzwa kuti uyite zviite. Dzimwe nguva unogona kuenda kuno bvunza kutatu, kuti ugozo zvisanganisa kuti uone kuti zvipi ndezvipi. Pane tsumo inonzi n'anga inopa zano ane rake. Zvichireva kuti iwe unozo sanganisa zvako nezvawaudzwa, chokwadi kuti uchibate.
Haikona kuita basa rekungo famba kumidzimu nekudzin'anga, kungo nakidzwa nekuda kuona kuti vanoona here, usingazo kohwerera zvaunenge uchiudzwa. Varoyi imwe nguva mapurisa evadzimu. Vadzimu vanonyatso tsvaga muroyi ano nyatso kugona, zvekuti unotono kandira chete, nekuti unenge wavekuti, howe amayihwe ndofa. Ichocho chinhu chavanodariro chinenge chiri chekuti uzive nekukurumidza uchi gadzirise. Saka vanoitira kuti uende kunonzwa chiri kudiwa kuitwa chacho mumusha mako, kana muhu penyu hwako, kuti vawane makuchengetero. Ukanozvinzwa ukazvi kohwerera, ivo vene vako ndivo vanozo takanura zvawanga waitwa zviya.
Ukaenda kwaunono udzwa kuti uri kuroyiwa nanhingi nezita, saka tambira ichi umugonewo iyeyo waenda kusiriiko. Nekuti hapana chinobuda ipapo unetenge uchitoita kunenge kukunhidzira moto. Nemhaka yekuti uya ari kuku roya anenge akatsigirwa zvaari kukuita zvacho nevene vako. Ndivo vano kuzururira musuwo wekuti vaya vapinde. Ukaenda kwaunono udzwa chiri kudiwa nevadzimu vako ndiko kwakanaka ikoko. Chiita izvozvo zvinenge zvanzi ndoo zviri kudiwa. Haikona kuti varegererei kukuudza arikuku roya, kovanenge vato baya dede nemukanwaka ivavo. Saka itira vadzimu zvavari kureva ava.
Zvavanenge vachireva zvacho ndezvekuti zvivagoneseka kukubatsira pakuku chengeta, kana rikava fuko, beta kana tsvimbo. Saka usati zvinonzi zvinetswa, kana kuti hwahwa hwezvinonetsa. Nhai mungati kutaurawo here ikoko?
Kukarehwa tsvimbo iva nayoka nekuti tsvimbo iya ichaturwa kwavari. Paunenge uyinayo kana kufamba nayo, ivo ndivoka vanenge votungamira. Kozvino ukaita iwe kuti ndiwe wava mudonzvo kutange mberi, zvingaitewo here nhai. Kukarehwa mombe yemusha ngaiturikwe mombe iyoyo, mombe yehumai ngai biswe, yechiredzwa kana wakarerwa rutivi ngai bisweka. Bvisa chishwe kana usingagone kuzviita ipapo pazvarehwa. Ko iye nhai ungamirire kuudzwa ne n'anga kuti mombe yezvakati ndoo yanetsa iwe uchizviziva?
Worevaka kuti mombe ndirikuiziva, asi pari zvino handina ndabvisa chishwe changu ichi, chekuti muzive kuti ndinoibvisa kana ndawana. Kana tiri kumusha chishwe chimuti chidikidiki, chakangokura semunwe wako uyu chaunoisa mundiro. Icho chimuti ndoochakanaka nekuti ukabvisa mari ichazo shandiswa zvisizvo zvika shaya basa. Chishwe chinomboita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka kwekanguva, asi kwete zvegore reseka. Imo mumusha handiti munodawo kubikwa mabira nguva nenguva edzinyota namatendo. Kozvino shungu dzavo dzingapererewo here pama rhekodzi aunotenga aye uchiridza?
Kana kuti kumadandaro emumaguta aye kana kumahoro, kwatinenge tichiridza zvedu zvekungo varairwa zvisina shumo zviya? Mabeta ngaabikwe mumisha umu, kana mumasango imomo.
Kunamata Mwari: Rimwe zuva ndakati ini dhuu, kufunga nezva Mwari vangu. Ndokufunga inini ndikati, minamato yese inoitwa mumachechi iyi handiti vanhu here vakainyora? Ndadii ini kunyorawo wangu munamato ndega kwavari Musiki, ndakanyora kuti: "Mwari ndiri kukutendayi pazuva ranhasi, kundisika kwama kandiita mukati mezvimwe zvisikwa zvese zvamaka sika pano panyika. Ndinotenda kundida kwenyu nekundi chengeta kwamunondiita, nekwamandiita pazuva ranhasi. Ndinotenda kuwana chekudya, zvekusimira, zvekufuga nepekurara. Ndigoneseyiwo Mwari vangu kukuitirai zvamunoda nekuti ini ndiri mweya wenyu. Ndidzoreyi kana ndopinda mukuita zvisinga pindirane nemi Mwari vangu. Ndigoneseyiwo kuregerera, vanonditadzira ini mweya wenyu. Kudakwenyu ngakuitwe pasi neku denga nechisikwa chese chamaka sika". Ndakaita muteuro wangu iwoyu kwemazuva matatu. Zuva rechitatu Musiki vakandi pindura kuhope vakati: "Muteuro wako wakanaka, asi usati wateura kwandiri tanga wateura vadzimu vako ndokuzo teura ini".
Ndoopandaka chizo nyora muteuro weku teura vadzimu vangu ndikanyora kuti: "Baba vangu, madzisekuru vangu, madzitateguru vangu, madzimbuya, madzitete. Ndinoku tendai nekundibereka kwamaka ndiita. Kundirera kubvira ndichiri kasvava kusvika nhasi ndakura, pasina imi kundichengeta handai svika pano pandava. Rambai muchindichengeta. Zvamunoda ndinokuitirai, asi zvimwe motoita muchindi rairidza, sekundirairidza zvinhu kwamaindiita ndiri mudiki. Nhasiuno hamusisiri mumiviri, huyayi kuhope muchindipa tsome, kuti ndizive kuteedza zvamunoda. Musandirege ndichiita zvisizvo mwana wenyu. Ndinokurumbidzai nekusinga pere".
Kuzobvira ipapo muteuro wangu kuna Mwari ndipo pavakazougamuchira. Miteuro yangu yese iri miviri ndinoita ndichiiwedzera ndichii gadziridza maererano nezvandinonzwa ndichida kunyatso teura ndichiita. Kwanhasi vazukuru nyaya iyi toisiira ipapo. kana muchirida motora zvenyu.